Ahoana ny fomba ahafahana manova backlinks amin'ny tranokalako?
Amin'izao fotoana izao, mbola manan-danja kokoa ny mahafantatra ny fomba hahazoana lohamilina tsara kokoa noho ny teo aloha. Raha ny marina, ny fananganana kalitaon'ny kalitao dia singa manan-danja indrindra amin'ny fivoaran'ny fikarohana ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izany dia matetika no heverina ho singa fototra iray amin'ny lanjan'ny liona amin'ny paikady momba ny varotra dizitaly. Noho izany, avelao aho hampiseho anao ny fomba hahazoana ny rindran-tsarimihetsika tsara - misy ny fihetsika tsotra efatra hanatanterahana ilay tanjona tsy misy loza mety hifehezana ny toro-làlan'i Google ary hahazo ny sazy. Ireto misy izy ireo: mametraka fifandraisana amin'ireo pejy manampahefana avo, mitazona ny lanjany sy mampiasa teny sy fikambanana malaza, manangana fifandraisana amin'ireo tranonkala malaza indostrialy, ary manome votoaty sarobidy ho an'ny fizarana fandraisana.
Fametavetana ny fifandraisana amin'ny pejy manam-pahefana ambony
Tsy ilaina ny milaza fa ny tranonkala avo indrindra (PR) dia sarotra be ny mahazo. Mandritra izany fotoana izany, maro loatra ny olona no mifantoka amin'ny ezak'izy ireo fotsiny amin'ireo pejy avo indrindra ao amin'ny PR mba hifandraisana. Amin'izany fomba izany, ny tranonkalan'ny tranonkala fampanantenana izay mbola manam-pahefana ampy eo amin'ny sehatry ny sehatra dia mety ho tsinontsinoavina matetika. Noho izany, nahoana raha ampiasaina io fahafahana hijanona amin'ny fifaninanana io, sa tsy izany? Toy izao ny fomba ahafahana miverin-dàlana tsara any - tsy manahy raha toa ka tsy ampy ny pejy Internet misy anao. Tiako ny ilainao rehetra dia ny manamarina fa misy fifandraisana DoFollow avy amin'ny pejy manampahefana avo, ao amin'io tranonkala io ihany miaraka amin'ny backlink anao manokana.
Mampiasa teny sy fikambanana tsara fanta-daza
Mitondra lanja lehibe foana ny marika fandraharahana lehibe, sa tsy izany? Midika izany fa ny fampiasana teny malaza amin'ny fifandraisanao amin'ny raharahanao manokana dia mety ho hevitra tsara - raha hampitombo ny lanjan'ny backlinks anao manokana. Ity misy ohatra tsotra amin'ny fomba fiasa - tamin'ny herintaona aho dia nahazo tombony tamin'ny famoahana ny teny tokana "Duracell" mba hiara-hiombon-kevitra amin'ny fivarotana e-varotra mivantana sy ireo fitaovana hafa azo amidy. Amin'ny farany dia manana loharano aho toy ny hoe "Andramo ny fantson-drano tsara indrindra sy ny Duracell maharitra maharitra miaraka amin'ny tsirairay. "Raha ny marina dia gaga aho fa mijanona ho telo amin'ny valin'ny fikarohana Google telo isam-bolana.
Fanorenana fifandraisana amin'ny sehatry ny indostria
Ny fomba tsara iray hafa amin'ny fomba hahazoana rindran-damba tsara dia manorina fifandraisana am-pirahalahiana amin'ireo tranonkala malaza mifandraika amin'ny indostrian'ny orinasa. Voalohany indrindra, misy tranokala marobe izay vonona ny hanome anao mombamomba anao miaraka amin'ny rohy DoFollow. Midika izany fa matetika aho no nahita valim-boka tena mahatsiravina rehefa ampiasain'ny olona hanamboatra combo ny fanarahana ny hafa sy ny fampidirana rohy fanindroany. Amin'izany fomba izany, ny profilà tahaka izany dia afaka manisy pejy maromaro avy amin'ny loharano maro samihafa mba hahazoana tombony azo antoka kokoa.
Fanomezana valisoa azo antoka ho an'ny fahafahana mandray anjara
Inona no mety ho tombontsoa kokoa noho ny manana fivoahana mahazatra izay afaka mandeha any amin'ny toeran-kafa amin'ny fomba samirery? Ity fahafahana ity dia azo tanterahana amin'ny votoaty sarobidy ilaina ho an'ny olona. Tokony hamporisika ny fizarana ireo pejy hafa manan-danja hafa, ary koa ny bilaogy manokana, ary ny profil amin'ny media sosialy. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mitadidy fa ny backlinks anao dia tsy tokony hapetraka fotsiny amin'ny vatanao ny lahatsoratra momba ny kalitao, fa ny tranonkalan'ny tranonkalanao ihany koa. Amin'izany, aza misalasala manasa sy mizara ny votoatinao amin'ny olona marobe amin'ny media sosialy, ireo tranonkala hafa liana, ary ny namanao sy ny mpiara-miasa aminao. Farany, mety manandrana mametraka ny tenanao amin'ny bilaogy vahiny ianao. Amin'ny ankapobeny, dia mandoa be izany Source .